Izindaba Zethu - IntoKildare
Zizwe ukuthi simayelana nani ngokuthola izindaba ezikhuthazayo ezivela eKildare!
Zonke Ukukhangisa Community Amasiko Ezokuzijabulisa Ukunambitha kweKildare Hlala Dine Shopping Couples Izenzakalo Family Imincintiswano Christmas I-Fáilte Ireland Izinto Ozozenza IMpumalanga Yasendulo Yase-Ireland Ekhaya Izindaba Ezokuvakasha zaseKildare Akufanele Uphuthelwe Imikhondo & Ukuhamba Ufudu Bunbury
CommunityEzokuvakasha zaseKildareIzindabaIzinto OzozenzaNaas
Sitshele ngohambo lweBarge. Ukuyichaza kalula, iBarge Trip ngumsebenzi omnandi omuhle kuwo wonke umndeni. Ilungele abantu abasukela ezinyangeni eziyisishiyagalolunye kuya ku- […]
Sitshele ngeLullymore Heritage Park Kuyindawo eheha izivakashi eWest Kildare, maphakathi nemizana yaseRathangan ne-Allenwood. Siheha izivakashi zasekhaya ezivela kulo lonke elase-Ireland futhi […]
DineAkufanele UphuthelweUkunambitha kweKildareIzinto Ozozenza
Izindawo zetiye zantambama ezinhle kakhulu eKildare kuzo zonke izabelomali kanye nesikhathi sokwenza ibinzana elidumile, kuhlale kunesikhathi setiye. Ikakhulukazi uma kukhona ama-scones namaswishi ku- […]
Ukuphuma Komndeni Okuphezulu Okuyi-5 Kokukujabulela eKildare phakathi neviki lamagugu likazwelonke
Thatha uhambo nengane yakho yasendle! Isikole siphumele ihlobo - futhi izingane ziya endle! Okungenani zizoba phakathi kweviki lamagugu likazwelonke, zilandelana […]
CouplesDineEzokuvakasha zaseKildareAkufanele UphuthelweShoppingHlalaIzinto Ozozenza
I-Spa, igalofu kanye nesitolo uze wehle njengengxenye yendawo yakho yokuhlala yasehlobo yaseKildare ephelele Njengoba uchithe iningi lezinyanga eziyi-18 ezedlule esimweni sokukhubazeka, lapho […]
AmasikoEzokuzijabulisaIzenzakaloAkufanele UphuthelweIzinto OzozenzaKildare
Izizathu ezi-5 zokubeka uMkhosi weKildare Derby ezinhlelweni zakho zasehlobo. Kodwa ngokusobala, njengoba […]
UJuni Fest Kildare 2021 - Nakhu ongakulindela
I-Kildare's June Fest ngumkhosi womndeni ophelele wehlobo lowe-2021 Njengoba umphakathi uvuleka kancane kodwa ngokuqinisekile ubhangqwe ngokufika kwelanga elidingeka kakhulu, ihlobo lango-2021 selivele libukeka […]
Iziphesheli Zosuku Lomama Oluhamba phambili eKildare
Usuku Lomama yilo leli Sonto- okusakunika isikhathi sokuthola leso sipho esikhethekile futhi kulo nyaka kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili ukuthola isipho sakho ngendlela efanele! Noma […]
Izipho eziphezulu zikaKildare zika-2021
Yize kulo nyaka singeke silugubhe uSuku Lwezithandani ngomqondo ojwayelekile, kunezindlela eziningi ongakhombisa ngazo othandekayo ukuthi unakekela kangakanani kulo nyaka! I-Kildare […]
AmasikoIzenzakaloI-Fáilte IrelandIMpumalanga Yasendulo Yase-IrelandNewbridge
IHill of Allen Iba 'yi-Beacon of Hope' yosuku lukaSt. Brigid
Bangene eKildare ukuhlonipha uPatron Saint wabo nge-Iconic Illumination
Ukushayela Zonke Izingane !! Dala Umncintiswano Wakho We-St Brigid's Day Cross!
Ukugubha uSuku lukaSt Brigid ngoFebhuwari 1, simema izingane ukuthi zizakhele iSt Cross Brigid's Day Cross !!
Letha abapheki abaphezulu be-Kildare ekhishini lakho kule sizini!
Ukunambitheka kweKildare kukumema ukuthi ujoyine imiboniso yethu yokupheka ebonakalayo nabanye babapheki abaphambili bezwe. Joyina Umpheki Wosaziwayo, uRachel Allen nabanye abapheki abaziwayo ngomkhosi wokujabula womkhiqizo omuhle kakhulu waseKildare nezitsha zonyaka.
Ukunambitheka Kokuphazanyiswa Kwezipho Kildare 'Foodie'
Ngubani ongakuthandi ukuthola isiphazamiso? Akukhona nje kuphela ukuthi umsindo webhasikidi ojiyile noma ukuqaqa iribhoni lebhokisi lesipho uheha kangaka, kodwa nokuthola indawo yokugcina amagugu […]
Izinto OzozenzaImikhondo & UkuhambaICelbridgeI-Leixlip
Landela ezinyathelweni zika-Arthur Guinness kulo mzila ka-16km, uthathe izindawo zomlando ezixhumene nabaphisi abadumile base-Ireland - umndeni wakwaGuinness. Hlola idolobha laseCelbridge […]
UKildare Ubungaza IViki Eliyigugu 'Elibonakalayo' ngo-2020
Ukugubha Iviki Lamagugu (futhi kunemikhawulo ye-covid ekhona), amaqembu endawo, imiphakathi kanye nezazi-mlando bahlele uchungechunge lwemisebenzi yamahhala, eku-inthanethi, ukuze ujabulele imicimbi engaphandle noma ngokunethezeka kwekhaya lakho !!
Isimemezelo Sokwenzelwa Lolu Suku Lwamazwe Ngamazwe
I-Irish Peatland Conservation Council, isibonelelo esisebenzela ukongiwa kwengxenye emele ama-peatlands ase-Ireland ukuze abantu bayijabulele namuhla nasesikhathini esizayo, bafuna USIZO LWAKHO nge-International Bog Day.
Imihlahlandlela eningiliziwe yezempilo nokuphepha evela eFáilte Ireland
IFáilte Ireland iveze imihlahlandlela enemininingwane yezempilo nokuphepha njengengxenye yehabhu labo elisha lokusekela ibhizinisi. Sicela ubheke eminye imihlahlandlela enemininingwane engezansi.
Izinkampani ezihola phambili ze-equine zibuyisela emuva embonini yokujaha
INaas Racecourse imemezele ukuthi abaholi baseIreland abahlinzeka ngokudla okunomsoco i-Plusvital bangezinye zezinkampani eziningi zezimboni ukuthi zikhuphuke zisekele imboni yokujaha ngalesi sikhathi esinzima.
UKildare wethula umkhankaso othi 'We Care In Kildare'
I-Kildare isungule umkhankaso okuhloswe ngawo ukuqinisa umphakathi wendawo kanye nezivakashi ukuthi amabhizinisi akulesi sifunda asebenzise izindlela ezanele zokuphepha nezempilo.
I-Fáilte IrelandEzokuvakasha zaseKildare
Ukusekelwa Kwebhizinisi okuvela eFáilte Ireland
IFáilte Ireland yethule uhlelo lwezinsizakalo zebhizinisi ukusiza amabhizinisi ukuhlela izinto ezibalulekile zokululama kwawo. Lokhu kusungulwe ngochwepheshe bezimboni ukuxhasa amabhizinisi ukuthi avule kabusha futhi aqale kabusha ibhizinisi labo ngempumelelo futhi kuzohambisana nemikhombandlela yokusebenza yokuvula kabusha nayo efakwe ohlwini olungezansi.
Umndeni Okulungele I-Ireland 2020 - Izicelo Zivulekile!
Umndeni Okulungele I-Ireland 2020 - Izicelo Zivulekile! Umndeni wakwa-Fittest wase-Ireland ubuyile futhi bafuna imindeni eKildare! Ngabe wena nomndeni wakho nithole okudingekayo ukuze […]
Ubulungu beKilkea Castle Golf
Izolo kuvulwe kancane kancane ezinye izingxenye zomnotho wethu igalofu ingenye yezemidlalo embalwa kakhulu evunyelwe ukuqala kabusha, ngaphansi kwezivumelwano eziqinile ezihlobene noCovid.
IKildare iyikhaya lamanye amagugu esizwe e-Ireland kanti ngenkathi sonke silinde ngokulangazela isikhathi lapho sizokwazi ukuphuma siyohlola iminyuziyamu emangalisayo, amapaki esikhungo sabavakashi, amapaki nezingadi. Jabulela ukuvakasha okubonakalayo futhi uthole okuhlangenwe nakho okusondele kakhudlwana ngolwazi olungeziwe lwangaphakathi oluvela kubasebenzi abahle kakhulu abagcina lezi zikhangiso zezivakashi zisebenza futhi zivaliwe.
Pheka noKildare - Amaresiphi aqhamuka esifundeni sonke
Izindawo zokudlela, amathilomu, imigoqo kanye nabakhiqizi bokudla baseKildare basebenza kanzima ukunikeza abantu imibono yokuthi bangakuletha kanjani okuthandwa kakhulu yizikhungo zabo ekhaya lakho. Sihlanganise ezinye zalezi zokupheka ezinhle ze-Kildare ukukunikeza ukunambitha kokunikezwayo!